कोरोना भाइरस कुन सामानमा कति लामो समयसम्म जीवित रहन्छ ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
काठमाण्डौ, १३ चैतः कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरस सतहमा पाँच दिनसम्म जीवित रहने देखिएकाले सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार ढोकाको ह्याण्डल, गहना, चाँदीका भाँडा, प्लेट, मग, कचौरा, गमलालगायत माटोका सामग्री तथा सिसाका गिलास, बोत्तल, कचौरा र मगमा यो भाइरस पाँच दिनसम्म जीवित रहन्छ ।
कोरोना भाइरस अहिलेसम्म खाना र पानीमा भने पाइएको छैन । तर कुनै पनि फलफुल खानुअघि वा तरकारी पकाउनुअघि राम्रोसँग पखाल्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ । सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा उनीहरुको मुखबाट निस्कने कफ वा ओसिला छिटामा भाइरस हुन्छन् । नजिकै रहेको स्वस्थ्य व्यक्तिले सास फेर्दा ती भाइरसयुक्त छिटा शरीरभित्र पसेर उसलाई पनि भाइरस सर्ने गरेको अध्ययनमा संलग्न अनुसन्धानकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
साभारः उज्यालाे अनलाइन